Nguyen Manh Hung BAADHITAAN QAYBTA ARDAYGA ilaa 40 sano ka hor - Qaybta 2 - Quduuska Barashada Dhulka Barashada Vietnam
Sii wad continued
Jaamacadda Hong Kong University International waxay tabobaraysay jimicsiga jirka. Kuwaas waxaa ka mid ah horyaallada Ly Duc, Pham Van Mach, Dinh Kim Loan. Maanta, ardayda Vovinam ee Jaamacadda Hong Kong International waxay heleen billaddii ugu horreysay ee dahab ah tartankii Vovinam ee caalamiga ahaa ee ka dhacay Aljeeriya kaasoo adduunka ka caawinaya inay fahmaan in Vietnam ka caawiso Vovinam inay horumariso. Laakiin ma ahan sida dad badani ay u fahmaan arrintaas wixii ka dambeeyay sanadkii 1975. iyo dhowaan, saddex sayidyadeed oo Vovinam (Bachelor art Arts of Hong Kong University International) wuxuu helay seddex billadood oo dahab ah Vovinam cayaaraha SEA Games 26, oo lagu qabtay Indonesia sanadkii 2011.
Sanadkii 1988, waxaa loo magacaabay Japan si uu u baro cilmiga Vietnamese (taariikhda, suugaanta, luqadaha, farshaxanka halyeeyada) intii u dhaxeysay 1988 ilaa 1992 jaamacada luqadaha ajnabiga ee Osaka (Nidaamka BA). Wuxuu ka qalin jabiyey Jendanka Kendo ee Japan ee loo yaqaan 'Kendo Association' ee lagu qabtay Kansai. Intaa waxaa dheer, wuxuu bartay Jidka Shaaha (Chdo), Kado (Ikebana) iyo acupuncture-ka Japan-ka (Shiatsu) mudadaas 4 sano ah. Markaa wuu danaynayay oo ka qaybqaatay dhaqdhaqaaqa caafimaad ee ardayda Saigon sanadihii hore iyo maalmahanba. Laga soo bilaabo dhaqdhaqaaqa "Jaamacadda Automatous" ee Saigon wakhtigaas (1963 - 1968) wuxuu gacan ka gaystay tarjumaada ereyada fanka halyeeyada, Kendo, Judo oo ka yimid Faransiis, iyo Jabaanna waxa loo galay Fiyatnaamiis (halkii Faransiis, Jabbaan) Dojo ee Jaamacadda Saigon.
Tan iyo markii la aasaasay Jaamacadda Hong Kong (1997), Wuxuu bilaabay inuu u gudbiyo Wasaaradda Waxbarashada iyo Tababarka ee Vietnam mashruuca koowaad ee Bachelor of Vietnamese art of art in Vietnam iyo caalami oo ay ku jiraan Vovinam - Viet Vo Dao iyo Vo co truyen Vietnam (Farshaxanka dhaqanka Vietnamese). Wasaaradda waxbarashada iyo tababarka Vietnam ayaa ka gaabisay arintaas waxayna ugu dambeyntii si rasmi ah u oggolaatay oo u oggolaatay Jaamacadda Hong Kong in ay barato fanka dagaallada 2001-dii oo ah daraasad cusub oo saynis ah. Ilaa hada waxaa jira koorsooyin badan, boqolaal arday ah oo qalin jabiyay oo noqday macallimiin, sayidyo da 'yarta ah. Gaar ahaan, waxay ka qeybgaleen tartammada waxayna ku guuleysteen billado dahab ah Vietnam iyo waddamada dibedda. Qaar ka mid ah bachelor-ka aadka u fiican ee fanka legdinta ayaa heysan doona tacliin sare xagga cilmiga barbaarinta iyo afafka qalaad sida Ingiriisiga, Faransiiska si ay wax ugu bari karaan jaamacadda Hong Kong iyo naadiyada fanka ee dibedda sida ku xusan heshiiska ay kula jiraan naadiyada fanka ee Yurub, Afrika iyo Mareykanka. of America. Iyo jaamacadda ayaa sidoo kale abaabushay qaar koorsooyin gaagaaban oo ku saabsan mowduuca caafimaadka ee masters of fanka Vietnamese fanka dagaal ee International Vovinam Federation, Vietnam Vovinam Federation iyo iskuulada kale ee fanka fanka, naadiyo faneed shisheeye.
Waxyaabaha ku saabsan maadooyinka acupuncture dhibicda (shiatsu), duugis (massage), iyo qigong, fikirka yoga… wuxuu dhammeystirayaa shaqada loo yaqaan wacyi gelin cusub: “Isku day inaad fahanto dhaqanka iyo taabashada jirka (tilmaanta acupuncture, duugista) si waafaqsan runta caalamka ”.
Aynu aqrino ereyadiisa: “Waxaan ku dhashay qaddarka 'geedka safarka' sidaa darteed waan tabar yaraa, waxaan la kulmay xanuun laakiin agoonta (aabihiis wuxuu ku biiray dagaalka ka dhanka ah faransiiska wuxuuna allabari galiyay markii uu 2 sano jiray). Hooyaday ayaa ii keentay nin doon doonida ah si loogu korsado waxaana loogu magac daray An si uu u duceeyo nabada. Ka degida doonida geedaha safsaafka ah biyo hel. Hooyaday waxay ka walwalaysaa caafimaadkayga, noloshayda. Marka waxaan ku celcelin jiray farshaxanka Binh Dinh (gudaha Saigon), Jabbaan Kendo (markii aan baray barashada Vietnamese ee Japan), Seefta xirfada ee Naadiga Kubadda Cagta Galbeedka ee CSS Saigon markaan ahaa arday, dhismaha jirka (Dhaqanka jimicsiga jirka esthétique) tan iyo sanadkii 1960 markii aan ahaa arday, oo aan bartay, oo ciyaaray ciyaaro isboorti (ping pong, laliska…).
Farshaxanka dagaalka, feker ahaanteyda, hadii aysan u tartameynin guusha, iyaga oo aan haysan wado ay kaga guuleystaan ​​qofka kaa soo horjeeda, waxay ka tagayaan cidlada, is-hoos u dhaca, qalafsanaanta, waxayna helayaan kalsooni ay ku noolaadaan oo ay ku nastaan. Waqtigan xaadirka ah, sayidyahanno badan oo reer Fiyatnaamiis ah oo fanka dagaalka kula jira jinsiyado badan oo kala duwan ayaa mararka qaarkood isweydiiyey 'Xagee laga keenay?' dagaal sanado badan qaatay ka dib, kala tag iyo midoobo. Si looga jawaabo su'aasha, Jaamacadda Caalamiga ah ee Hong Bang University kaligeed si ay u soo jiito ilaha oo dhan si ay u soo laabato maaddaama 'biyuhu u socdaan dhanka hoose', maadaama "biyuhu u socdaan asalka asalka ah, caleemuhuna ku dhacayaan xididka '. Marka, dareenkaas waxaan u qorsheeyey koorsooyinka tababarka ee 'Bachelor of Vietnamese artial art' oo ah 'cinwaan hoosaysa' ee jaamacadda si aan u idhaahdo farshaxanka dagaalku waa saynis farsamo, aragti, walxo, ujeeddooyin, iyo gaar ahaan 'wax soo saarkooda' '- in bulshada hadda laga filayo wicitaan - kaliya ma ahan dalka laakiin gaar ahaan adduunka - in dad badan oo dalka ku nool aysan wali ogeyn qiimaha dhabta ah.
Dad badan ayaa u maleynaya in fanka dagaalku yahay waxqabadyo arxan darro ah. Laakiin dhab ahaan - aniga aragtidayda - fanka dagaalku waa bini'aadamnimada la xidhiidha waxqabadyada suugaanta iyo farshaxanka milatariga, siyaasadda, hubka, fikirka, falsafada, sayniska caafimaadka, jirka, taariikhda, daraasaadka dadka,… Haddii suugaantu tahay 'eray qoran' markaa fanka dagaalku waa 'tilmaam iyo ereyo'. 'Ereyada qoraalka, ereyada iyo dhaqdhaqaaqyada' waa astaamaha isirka aadanaha oo dhameystiray talaabada koowaad ee anshaxa. Taariikhda Fiyatnaamiis ee la xiriirta geedi socodka la dagaalanka shisheeyaha ku soo duulay dalka si aan u ilaalino dalkeena una ilaalino dhaqanka soo jireenka ah ee qaranka iyo farshaxanka dagaalka ee howshaasi waxay leeyihiin door muhiim ah, si kale haddii loo dhigo doorka "jiritaanka". Taariikhda ayaa duubtay dhamaan dhakhaatiirta ku xeel dheer suugaanta Van Mieu (Macbadka Qorista), oo lagu duubay dhammaan doktotiyadii farshaxanka ee Vo Mieu (Macbudka Arts Arts). Markii wadanku xasilloonaa, fanaaniinta fiyatnaamiska looma tixgalin maxaa yeelay bulshada uma maleyneynin in fanka dagaalku inuu yahay nashaadaad u tababarayo dagaalka iyo ku barbaarinta nafta had iyo jeer nolol maalmeedka bulshada bulshada laakiin kaliya waxay u maleynayaan in xirfadleyaasha fanka dagaalku inay soo galaan giraanta. inaad ka adkaato kooxda kaa soo horjeedda, oo u keenta khasaare intaa ka sii badan oo qallafsan oo ka badan tartamada kale ee ciyaaraha !!!
“Intaas waxaa sii dheer, taariikhda Fiyatnaamiis laga bilaabo sanadka 1930, 1945, 1954, 1975, jiilal dhowr ah oo reer Fiyatnaam ah ayaa dibedda ugu safray sababo badan oo kala duwan awgood. Waxay keeneen Fiyatnaamiis fanka dagaalka si ay ugu horumariyaan dalalkii ay ku xireen laamihii farshaxanka ee xirfadaha iyagoo wata magacyadooda kuwaas oo dib u sameeyay taariikhdii Vietnam ee Saigon 300 sano - aag wuxuu u dhigmaa xilligii la aasaasay Mareykanka ee shakhsiyadda isku ekaanshaha iyo waxyaabaha gaar ahaaneed, teachers Macallimiintaas waxay leeyihiin sida Quan Khi Dao, Hoa Long Vo Dao, Cuu Long Vo Dao, Thuy Phap, Vo Khi Dao, names iyo waliba magacyo kale oo badan ayaa ku soo kordhaya adduunka 5 qaaradood ”.
Ilaa hadda wuxuu soo maray dalal badan wuxuuna la saxiixday iskaashi tababar Ururka Caalamiga ah ee Fiyatnaam fanka dagaalka, Ururka Guud ee Horumarinta Farshaxanka Dunida, Vo Khi Dao ee Vietnam ee Jarmalka, Xiriirka Guud ee Caalamiga ah ee Quan Khi Dao, The World General Xiriirka Vovinam, Farshaxanka Farshaxanka ee Faransiiska, Xiriirka Vietnam Vu Dao, Xiriirka Cuu Long Vo Dao, Thuy Phap Federation,… iyo Jaamacadda Hong Bang International waxay ka dhisteen Faransiiska iyo Talyaaniga laba laamood. Gaar ahaan Aasiya, wuxuu la shaqeynayey Xiriirka Farshaxanka ee Kuuriya. Mustaqbalka wuxuu ka heli doonaa jidka loo maro Shaolin Kung Fu oo ka socda Shaolin Temple ee Shiinaha - oo ah gogol ilbaxnimo, hidaha iyo dhaqanka aadanaha waa in loo dhawaadaa si loo barto is-hoosaysiinta iyo xushmadda sida riyo halyeey ah. Safarkiisa oo dhan wuu bilaabay wuuna sii waday.
Jaamacadda Caalamiga ah ee Bang Bang ayaa soo qaban qaabisay Bandhig Faneedka Caalamiga ah ee Bang Bang International.2008) oo ku yaal Saigon in ka badan 300 oo ah ardayda fanka hal abuurka oo ah 36 ergo oo ka kala socda 15 waddan. Marka labaad (2010) waxaa lagu qabtay xarumo kuyaal gobolka Ba Ria - Vung Tau oo ay weheliyaan in kabadan 500 oo ardayda fanka dagaalka ah 83 ergo oo ka kala socda 32 wadan iyo territoris. Iiddii saddexaad (2012) wuxuu ka socdaa Saigon. Waa rabitaan xoog leh! Sidee ayaynaan u liicin rabitaan marka iiddu ay noqotay xafladaha dhaqanka.
Bandhiggu wuxuu fursad u yahay laamaha fanka ee Vietnam iyo kuwa caalamiga ah ee dagaalka si ay u soo bandhigaan habka farshaxanka ee laamahooda, oo ay u keenaan Vietnam Fatherland sayidyadiii farshaxanka, ardayda farshaxanka dagaalka ee jinsiyado badan, farsamooyin, qaabab qarsoodi ah, khibrado, jacayl qaran, qadarin meelahoodii awoowayaasha, dhulkii awoowayaasha… in lagu daro adduunka oo dhan fanka dagaalka si loogu qurxiyo jacaylka dadka, aadanaha.
Iyada oo qayb ka ah horumarkiisa, laakiin waxay ka fiirsanayeen habka iskaashiga maalgashiga si wadajir ah iyadoo wadnaha iyo maskaxda loo dhisayo mashruuca "Tay Son Martial Arts Academy" - tababar iyo cilmi baaris Vietnam iyo farshaxanada caalamiga ah. Akadeemiyada Akadeemiyada Dhaqanka ee Tay Son waxay noqon doontaa akadeemiyadii ugu horeysay ee dagaal faneed ee dalka, waxaana la dhigaa dhulka Binh Dinh, hadii ay dowladu taageerto. Tani waxay noqon doontaa dhacdo muhiim ah, oo calaamadeyn doonta kor u qaadista fanka dagaalka ee Fiyatnaamiis si xoog leh adduunka. Laakiin sidee qofku u sameyn karaa? - Ma awoodo - qori balastar ah ayaa la jebin doonaa, laakiin xidhmo yaxaasro ah ayaa ka xoog badnaan doona ./.
◊ Nguyen Manh Hung BAADHITAAN QAYBTA ARDAY tan iyo 40 sano ka hor - Qaybta 1
(Booqday jeer 675, booqashooyinka 1 maanta)
Views Views: 1,810
← Nguyen Manh Hung BAADHITAAN QAYBTA ARDAY tan iyo 40 sano ka hor - Qaybta 1
Sida Rabitaan ah “GURGAGE HORSE” ee UNIVERSITY →
Comments Off qoraalka HÁN
LIISKA DIIWAANADA DIIWAANKA A, B, C - Holylandvietnamstudies.com
GOUJIAN: Seefta qadiimiga ah ee Shiineeska ah ee Waqtigeedu Dhawaaqay (4,717)
VIETNAMESE ma LUUG adag bay tahay in wax la barto? (3,841)
Beesha CHUT oo ka kooban 54 qowmiyadood oo Vietnam ah (2,614)
LUQADA VIETNAMESE ee Fiyatnaamiis iyo Shisheeye… (2,563)
TAARIIKHII GUUD EE VIETNAMESE Qorista - Qaybta 2 (2,441)
Talobixin ayaa la siinayaa waxa loo yaqaan "WEAR" oo laga soo qaado WIXII SIFKNESS Xilliga TET
Comments Off Talada la siinayo waxa loo yaqaan "WEAR to WARD Off Sndrome" inta lagu jiro TET
Beesha GIAY oo ka kooban 54 qowmiyadood oo Vietnam ah
Comments Off on Community GIAY ee 54 kooxaha qowmiyadeed ee Vietnam
Beesha CHUT oo ka kooban 54 qowmiyadood oo Vietnam ah
Comments Off ee Beesha CHUT ee 54 qowmiyadood oo Fiyatnaamiis ah
Faransiiska ORIENTALIST - Qaybta 1
Comments Off ku saabsan ORIENTALIST Faransiis - Qaybta 1
Beesha THAI ee ka kooban 54 qowmiyadeed oo ku nool Vietnam
Comments Off on the THAI Community of 54 kooxaha qowmiyadaha ee Vietnam
Booqashada Maanta: 220
Booqashooyinka Maalmihii 7 ee ugu dambeeyay: 3,141
Guud ahaan Wadarta: 286,036